MODA | Article Detail | လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ
Sign up for Newsletterarrow_forward
At MODA, we take the privacy of our website visitors and subscribers seriously. We make every effort to secure your data with the best technology available to us. We try our best to listen and understand what the Modians are curious about and satisfy that curiosity inameaningful way. Our website and various feedback mechanism allow us to make that goal possible. We use the feedback data solely to make the website and its content better everyday.
Subscribe Now and GetaFree Gift
one year (12 issues) delivered straight to your door for just 28,000 MMK
by JN Ja Seng Pan
“မနက်အိပ်ယာထလို့ အလုပ်သွားရမှာ ပျော်ရွှင်မနေဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီအလုပ်က ထွက်လိုက်ပါ” ဆိုပြီး ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာ ဒုတိယအိမ်ပါပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ လူတစ်ဦးဟာ မိမိအိမ်မှာထက် အလုပ်မှာရှိတဲ့အချိန်က ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဝါသနာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရွေးချယ်မှု ကိုက်ညီပါစေ။ လူတိုင်းဟာ ဝါသနာပါတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းဟာ အကြီးမားဆုံး ဆုလာဘ်တစ်ခုပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝါသနာနဲ့ မိမိကျင်လည်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကိုက်ညီမှုမရှိတာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် အရာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်မှ အကောင်းဘက်က တွေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲနေရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေမှာပါ။ အရေးမကြီးတဲ့ အရာတစ်ချို့ကို လျစ်လျူရှု့လိုက်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအဆိုးမြင်နေသူ ၊ အတင်းအဖျင်းပြောတတ်သူတွေကို ရှောင်ရှားပါ။ သူတို့က သင့်ကို လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေပဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ လေကောင်းလေသန့်တွေကို တားဆီးပေးမယ့်သူမျိုးကို အထူးသတိပြုပါ။
အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်လို့ရနိုင်မယ့် လူမျိုးကို ရှာဖွေပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံသာမကပဲ ပြင်ပနေထိုင်မှုပုံစံ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Stress တွေကို လျော့ပါးစေတဲ့အပြင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းတွေလဲ ရရှိနိုင်မှာပါ။
သင့်မှာ Personal Problem တွေ ရှိရင်တောင်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို သယ်ဆောင်မလာပါနဲ့ ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင်ဟာအမြဲတမ်း အလုပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ မြင်တွေ့ပါစေ။ Personal Problem တွေကို လုပ်ငန်းခွင်ကို သယ်ဆောင်လာခြင်းဟာ အလုပ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြင် အထက်လူကြီးရဲ့ အမြင်မကြည်လင်မှုကို သင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ဒီတိုင်းရပ်မနေပါနဲ့ ။ သင့်ရဲ့ Professional အလုပ်ကို တစ်ဆင့်ထပ်တစ်ဆင့် တိုးတက်အောင်အမြဲလေ့လာနေပါ။ မတူတဲ့ challenge တွေကို လုပ်ဆောင်နေရခြင်းဟာလဲ သင့်ကို အမှန်တကယ် စိတ်လှုပ်ရှားစေမှာပါ။
ကဲ ဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကို သိရှိပြီဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းနေကြည့်ကြရအောင်နော်။
ကိုယ့်ကောင်လေးက ကိုယ့်ထက် ပိုပြီး အလှအပကို စိတ်ဝင်စားတတ်သူလား။
ကိုယ့်ကောင်လေးက မိန်းကလေးတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို လုပ်နေတတ်သူလားဆိုတာ
by Lin Lin
ဒီဘက်ခေတ်မှာ အလှအပနဲ့ပတ်သက်ရင် မိန်းကလေးတွေသာမကဘဲ ယောကျားလေးတွေပါ စိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ။ များသောအားဖြင့် Fitness Center တွေမှာ အများစုတွေ့ရတာ အမျိုးသားတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် GYM ကစားကြသလို Skin Care နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စိတ်ဝင်စား ပြင်ဆင်လာတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုသာမာန်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာ ပြသနာမရှိပေမယ့်လည်း သာမာန်ထက်သာလွန်ပြီး အလှအပကို စိတ်ဝင်စားလာခြင်းကတော့ အမျိုးသမီးတို့အတွက် နဲနဲပြသနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ မိမိရဲ့ Crush ဒါမှမဟုတ် မိမိရဲ့ Boyfriend ဟာ သာမာန်ထက်ပိုပြီး အလှအပကို စိတ်ဝင်စားနေပြီလား တစ်ချိုု့ မိန်းကလေးတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို လုပ်နေတတ်သူလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ပေါင်သားကိုဖုံးအုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဘောင်းဘီကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒူးအထက်ဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်သူအများစုကတော့ သူတို့ရဲ့ ခြေသလုံးတွေကို လှပစေရန်အတွက် ခြေသလုံးမွှေးတွေကို ရှင်းတတ်ကြပြီး ခြေထောက်အသားကို ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်တတ်ကြသူတွေပါ။ ယောကျားလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ခြေသလုံးမွှေးကို ရိတ်ခဲကြပါတယ်နော်။
တော်ရုံတန်ရုံအမျိုုးသားတွေက ပန်းရောင်ကို ရှောင်တတ်ကြပါတယ်နော်။ တစ်ခါတစ်ရံမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ အဝတ်အစားတွေက များသောအားဖြင့် ပန်းရောင်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပျိုမေတို့ သတိထားဂရုစိုက်ဖို့ လိုနေပါပြီနော်။
ယောကျားလေးအများစုဟာ ဇင်ယော်တောင် မျက်ခုံးထူထူတွေနဲ့မှ စော်ကြည်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတော့ မျက်ခုံးမွှေးရိတ်ဖို့ကို စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ သင့်ရဲ့ Boyfriend ဟာ မျက်ခုံးတွေကို လှလှပပလေး ရိတ်ထားပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတံက ကောင်းလဲဆိုတာကို နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ဖို့ အဖော်ရပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့။
Sunscreen မပါဘဲ အိမ်အပြင်ကို မသွားလျှင်………….
သာမာန်အမျိုးသမီးတွေတောင်မှ တခါတလေမှာ အပြင်ထွက်ရင် Sunscreen လိမ်းဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကောင်လေးဟာ Sunscreen မပါဘဲ အိမ်အပြင်ကို မသွားတတ်သူဆိုရင်တော့ သူ့ကို စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီနော်။
Super Skinny Jean တွေကို သာမာန်ထက်ပိုဝတ်ဆင်တတ်လျှင်……….
Skinny တွေကို အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားရော ဝတ်ဆင်ကြတာဟာ မထူးဆန်းပေမယ့်လည်း Super Skinny Jean တွေကို သာမာန်ထက်ပိုဝတ်ဆင်နေပြီဆိုရင်တော့ ထူးဆန်းနေပါပြီနော်။
Skincare တွေကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်တတ်လျှင်……….
အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကကျတဲ့ Skincare Product တွေကို စိတ်ဝင်စားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Home Care DIY တွေနဲ့ ပုံမှန် ထိနိးသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဆီက နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတော့။ Skincare နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်သိထားတာထက်ကို ပိုသိနေမှာအသေအချာပဲမို့ပါနော်။
သင့်မှာရှိတဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းထက် သူ့မှာက ပိုများနေလျှင်………..
ဒါဆိုရင်တော့ အတူတူမျှသုံးဖို့ ဆွေးနွေးလိုက်ပါတော့နော်။ သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မစဉ်းစားမိတဲ့ Cosmetic တွေ၊ Lipstick ၊ Eyeshadow Color တွေသူ့မှာ အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်ရှိနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပွဲလမ်းသဘင်သွားတဲ့အခါ သူကတောင်မှသင့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Color ကို ရွေးချယ်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်။
#Is your boy more interested in beauty than you?
မိန်းကလေးအများစုမှာရှိတဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို သွားမပြောမိစေနဲ့နော်
by May Shoon
ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အချက်တွေထဲက အသိသာအထင်ရှားဆုံးက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုအပိုင်းနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုအပိုင်းပါ။ ဆိုလိုတာက မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျာလေးတွေထက်အရာရာမှာ စေ့စေ့စပ်စပ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် စဉ်းစားတတ်ကြပြီး ပိုလည်း ခံစားလွယ်ပါတယ်။ Overthinking လုပ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ရာခိုင်နှုန်းအများစုက မိန်းကလေးတွေပါ။ အဲ့တော့ ကိုယ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေရှိရှိ သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို အထူးသိထားပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါဆို သင့်အတွက် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ ဘယ်လို Relationship မဆို အဆင်ပြေချော့မွေ့နိုင်မှာပါ။
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း သင်ရော အောက်က ပြောတဲ့ Insecurities တွေထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျေမနပ်ဖြစ်မလဲ။ တကယ်လို့ အဲ့ Insecurities တွေရှိရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးပယ်ဖျောက်ပြီး ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ကြမယ်နော်။
ကဲ ဒါဆို မိန်းကလေးအများဆုံး ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ
ဒါကတော့ မိန်းကလေး အယောက် ၉၀% မှာရှိတဲ့ Sensitive ဖြစ်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ အသက်အရွယ်က အများစုက Privacy အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်မို့ တတ်နိုင်ရင်မမေးတာပိုကောင်းပါတယ်။ မေးရင်လည်း အသက်ကို လျှော့ပြောတာက အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
စေတနာနဲ့ ပြောတာဖြစ်ဖြစ်၊ စပ်စုပြီးပြောမိတာဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်နဲ့ မျက်နှာပေါ်ကအပြစ်အနာအဆာတွေအကြာင့်းကို သွားမပြောပါနဲ့။ ဟယ်မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံပေါက်နေတယ်တို့၊ အသားညိုသွားတယ်တို့၊ နင့်ဆံပင်က ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတို့ သွားမပြောပါနဲ့။ မိန်းကလေးတွေက အဲ့လိုမပြောခင်ထဲက သူတို့ကိုယ်တိုင် အဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေအတွက် စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။
သင့်ရဲ့ ဝလာတယ်တို့ ၊ ပိန်သွားတယ်တို့၊ ပေါင်တုတ်လာတယ်တို့က မိန်းကလေးတွေရဲ့ Psycho အရိုက်ဆုံး Judgement တွေထဲမှာပါပါတယ်။ ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို နှိုင်းယှဉ်ပြောတာကလည်း မိန်းကလေးတိုင်း စိတ်အညစ်ဆုံး Topic ပါ။
Body Weight ကလည်း Body Shape နဲ့ အလားတူပါပဲ။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကျတာက ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်တော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ အရမ်း Sensitive ဖြစ်တဲ့ အချက်ပါ။ သင့်က နင်နည်းနည်း ဝိတ်တက်လာတယ်လို့သာပြောကြည့်လိုက် တစ်ပတ်လောက် ဝိတ်တွေချ၊ ညစာမစားတွေလုပ်မိရော။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အရပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း အရပ်ရှည်တယ် အရပ်ပုတယ်ဆိုတဲ့ Comment တွေက အပြင်ပန်းသိပ်မသိသာပေမယ့် မိန်းကလေးတွေအတွက် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်စေတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူမဝတ်ဆင်တဲ့ ဖက်ရှင်၊ အပြင်အဆင်တွေကို လှတယ် Style ကျတယ်ပဲ အမြဲကြားချင်တဲ့သူပါ။ ချီးကျူးတဲ့ Comment ကအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် Negative ဘက်ရောက်တဲ့ Judgement ဆန်ဆန် Comment တွေကတော့ Shock အကြီးကြီးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သူဝတ်ထားတာက ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင် “ဒီလိုဝတ်တာမလှဘူး” ဆိုတာမျိုးထက် “ အဲ့အစားဒီလိုလေး ဝတ်လိုက်ရင်ပို ကြည့်ကောင်းသွားမှာ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကိုပဲပြောပါ။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ Income ကြောင်းကို မပြောတာကတော့ Society တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါ။ သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ နေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေအဖို့ Income ကိုလည်း Personal ပဲထားချင်ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူညီကြပါဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ သူတို့ အချစ်ရေး ဘယ်လို သာယာကြောင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းကြောင်းပြောလေ့ရှိပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့လည်း သူတို့ရဲ့ Love Life ကို Low Key ပဲနေကြပါတယ်။ Privacy ပဲထားသင့်တဲ့ Topic မို့လို့ ဒီအချက်ကို ပြောရင်လည်း ဂရုစိုက်ပြီးပြောဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
အမြင်ဆန်းပြီး Stress လျော့စေနိုင်မယ့် အလုပ်စားပွဲမှာအလှဆင်ဖို့ အပင်လေးများ
အစိမ်းရောင်အပင်တွေကြောင့် အားရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးစေပါတယ်။
နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ရဲ့ Stress တွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အများအားဖြင့် ကွန်ပျူတာအကြည့်များလို့ ဖြစ်စေ ခေါင်းတွေကိုက်ပြီး စိတ်မကြည်မသာဖြစ်မှုတွေ အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံတွေ့နေရမှာပဲနော်။ ဒီလို Stress တွေ ကို လျော့ကျစေပြီး အာရုံလွှဲစေဖို့အတွက် ကိုယ်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲလေးပေါ်မှာ စိတ်လန်းဆန်းပြီး မျက်စိအေးစေဖို့အတွက် ဘယ်လိုအပင်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်လို့ ရနိုင်မလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ စားပွဲပေါ်မှာ အပင်တွေထားခြင်းအားဖြင့် လေထုအရည်အသွေးကို တိုးတက်စေပြီး အစိမ်းရောင်အပင်တွေကြောင့် အားရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးစေပါတယ်။
အလုပ်စားပွဲမှာ ထားရှိသင့်တဲ့ အပင်တွေဟာ အလင်းရောင်နည်းတဲ့ အပင်တွေဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Rubber ပင်သေးလေးတွေဟာ အလုပ်စားပွဲမှာ ထားဖို့သင့်တော်တဲ့ Indoor အပင်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရုံးဝန်ထမ်းတော်တော်များများကတော့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်စားပွဲမှာ Bonsai ကဲ့သို့အပင်ငယ်လေးတွေ ထားရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။
Indoor Plants ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ Indoor အပင်တွေကို ထားရှိခြင်းဟာ ကရိကထမများဘဲ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်လောက်သာ ရေလောင်းပေးရင် ရတာကြောင့် အလုပ်ရှုပ်လည်း သက်သာစေပါတယ်။
This Week's Hottest Picks
COMMUNE WEAR EVERYDAY SANDALS
ALL WE NEED ESSENTIALS HOODIE
KANOTE MAN-N KANOTE PHONE COVER
MAYBELLINE SUPER BB CUSION
COMMUNE WEAR MIAMI EARRINGS
MAYBELLINE BB SUPER COVER
COMMUNE WEAR CAPUCCINO RATTAN EARRINGS
JELLY BUNNY ZANDRA FRIDA SHOES
FURLA MUGHETTO CROSSBODY BAG
MDS FLORAL EMBROIDERY HOOP EARRINGS
TIMBERLAND COTTON SHIRT
TIMBERLAND ANKLE LEATHER BOOTS
BODY BODY COCONUT SWEET ALMOND BODY ILLUMINATING GLOW OIL
NOT COPYRIGHTED SATIN HAT
BODY BODY MOROCCAN EXFOLIATING SOAP
ARMANI EXCHANGE MEN FLEECE PANTS
NOT COPYRIGHTED NEON GREEN PENCIL SKIRT
YANGOODS SWAL-TAW RUBY WALLET POUCH
PENSHOPPE SEMI-FIT TANK TOP
YANGOODS MYSTIQUE SCARF
NOT COPYRIGHTED WHITE JACKET
ARMANI EXCHANGE WOMEN ECO-LEATHER JACKET WITH BELT
ADIDAS ULTRABOOST 19 MEN
PENSHOPPE SUEDE CAP
YANGOODS LAI RAM ROUND BAG
REVLON PHOTO READY INSTA-FILTER FOUNDATION
by Randy Win
တစ်ယောက်တည်းနေရတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်သလို လူတိုင်းအတွက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိတ်တိတ်လေးကြိတ်ကြွေနေရတဲ့သူမျိုးရှိလာတဲ့အခါမှာ ပိုဆိုးပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုယ် Crush ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဘယ်ကဘယ်လိုဇာတ်လမ်းစရမယ်ဆိုတာကိုပါ မေ့နေလောက်ပြီဖြစ်တဲ့ နှစ်ချို့ FA ကြီးတွေအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဦးတည်ပြီး ဈေးဗန်းခင်းဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကို ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ ဒီလို အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နှစ်ချို့ FA ရာထူးကြီးကနေ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဈေးဗန်းလှလှလေးတွေခင်းရမလဲဆိုတာကို ဒီ post လေးကနေ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေး‌တစ်ချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်တာမို့ သေချာလေးဖတ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်နော်။
အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ကိုယ် Crush နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကုပ်ချောင်းချောင်းလုပ်နေလို့ကတော့ အရမ်း ကံကောင်းလွန်းမှသာကိုယ့်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်ရှိနေမှန်းတောင်ဟိုကသိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သတိထားမိအောင်လုပ်ပါ။ စကားတွေ လိုတာထက်ပိုသွက်နေတာမျိုး၊ မသိမသာရော သိသိသာသာရော လှမ်းလှမ်းခိုးကြည့်တာမျိုး၊ စကားအသံကိုမြှင့်ပြောတာ‌မျိုးတွေပေါ့။ သတိထားမိအောင်နေဆိုလို့ သူ့ရှေ့မှာလက်လက်ထပြတာတို့ ၊စွာတေးလန်နေတာတို့ မလုပ်မိဖို့တော့အထူးသတိပြုရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် crush က ကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောနေပြီဆိုရင် သူပြောတာမှန်ကန်ကြောင်းကို သွယ်ဝိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရော ၊ ဒဲ့‌အားဖြင့်ရော ထောက်ခံပါ။ သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအ‌ရာပေါ်မှာ သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှူပိုရှိလာအောင် အားပေးပါ။ သူပြောသမျှကိုကောင်းကောင်းနားထောင်ပါ။ အလိုက်သင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ အကြံကောင်းပေးပါ ။ သူပြောတာ မှားနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဒဲ့ကြီးသွားမငြင်းပါနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့ သင်ဟာသူ့ရဲ့ ရင်ဖွင့်ဖော် တီးတိုးတိုင်ပင်ဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
3.Social Media ကိုအသုံးချပါ
ဒါကတော့ အထူးပြောပြနေစရာတောင်မလိုတဲ့ ဈေးဗန်းပင်လယ်ကြီးပါ။ ဘယ်သူမှသင်စရာမလိုပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လည်းအသုံးချတတ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မသိသေးပါဘူးဆိုတဲ့ လူရိုးလေးတွေအတွက်ထပ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ (မြန်မာကလူတွေအသုံးများတဲ့ facebook ကိုပဲအဓိကထားပြောရရင်) ကိုယ်ဟာ Single တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိသာစေတဲ့ memes တွေ၊ postတွေ share ပါ။ Crush ရဲ့ ပုံတွေ၊ post တွေ မှာ react လေးတွေပေးပါ ။ Comment ကောင်းလေးတွေ ရေးပါ။ Messenger မှာ သွားစကားမပြောရဲရင် My day မှာ ကောမန့်သွားရေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါ( My day ကိုကောမန့်ရေးရင် messenger ထဲတန်းရောက်တာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ)။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်တော့ ဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလို ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်သလို မျက်နှာပူစရာမလိုပဲ ဇာတ်လမ်းကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ စနိုင်ကြမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးသားချင်ယောင်ဆောင်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ တခါတလေမှာ အဲဒါဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှူတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အရမ်း ပြီးပြည့်စုံချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုးကကြာကြာလည်းမခံသလို အခန့်မသင့်လို့ရိပ်မိသွားရင် စိတ်ခုစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အတတ်နိုင်ဆုံးရိုးသားပွင့်လင်းပါ။
ကိုယ့်ရဲ့တချို့ပြသနာတွေကိုရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ရင်းသူ့ဆီကအကြံကောင်းလေးတွေတောင်းပါ။ သူပေးတဲ့အကြံကောင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါ။ ဒါဟာ ကိုယ်သူ့အပေါ်အားကိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတာလည်းပြရာရောက်သလို မကြာခဏသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
မျက်နှာကြီးသုန်မှူန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို တော်တန်ရုံဘယ်သူမှစကားမပြောရဲသလို စကားလည်းမပြောချင်ကြပါဘူး။ မတော်တဆ ကိုယ့် Crush က ကိုယ့်ကိုကြိုက်နေရင်တောင် ကိုယ့်မျက်နှာကြီးကြောင့် ‌လန့်ဖျန့်ပြီး ဝေးဝေးရှောင်နေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် မျက်နှာမှာ အပြုံးကိုအမြဲဆောင်ထားပါ။ ဖော်ရွေချိုသာတဲ့အပြုံးနဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘယ်လို ယောက်ျားလေး ၊မိန်းကလေးကိုမဆို အားလုံးက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမေတ္တာရှိတတ်ကြပါတယ်။
Photo Credit to the Rightful Owners
မွေးဖွားခါနီးမေမေတို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ။
မေမေတို့ရေ Baby လေးမွေးဖွားဖို့အချိန်နီးကပ်နေပြီလား။ Baby လေးကို တွေ့ရဖို့အတွက်ကိုရော ရင်ခုန်နေပြီလား။ Baby လေးမမွေးခင်မှာ မေမေတို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အရာလေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်နော်။ ဒီအရာလေးတွေဟာ Baby လေးရဲ့ ငယ်စဉ်ကာလမှာသာမက ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်တွေအတွက်ကိုပါ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။
ကလေးမွေးဖွားခါနီးမှာ မေမေတို့ဟာ များသောအားဖြင့် ကလေးရဲ့တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းတွေစုဆောင်းခြင်း ၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာခြင်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုအကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာထားတတ်ကြပါတယ်။ မေမေတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကို လေ့လာပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
မေမေတို့အနေနဲ့ Childbrith Education နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Chidbrith Education ဟာ မေမေတို့အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးဖွားခြင်းနဲ့ အုပ်ထိန်းမှု အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မေမေတို့အတွက်ပါ အထောက်အကူများစွာရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Baby လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Birth Plan ကို ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Plan ဟာ သင့်အတွက်သာမက သင့်ကလေးအတွက်ပါ များစွာအကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Birth Plan မှာ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ရှောက်မှု၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Procedure များ၊ ကလေးကို ထမင်းစတင်ကျွေးဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့် အချိန်နဲ့ အဟာရဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက်များ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့် မွေးဖွားသည့်ပုံစံ စသဖြင့် ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ဒီ Plan ကို သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူတူရေးဆွဲပြီး ပြုလုပ်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို တိုင်ပင်မျှဝေပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကလေးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Due Date ရက် အတိအကျ မွေးဖွားခြင်းဟာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိပြီး Due Date ကျော်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် Due Date မတိုင်ခင်မွေးဖွားခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ စိုးရိမ်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ မွေးဖွားလာမယ့် ကလေး ကျန်းမာဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေတို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်စွာနေထိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
#For New Born Baby
#How to Prepare for Baby
မိန်းကလေးတွေ Online ကနေဈေးဝယ်တဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားများ
မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ လှလှပပနဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ နေချင်သူတွေမို့ အခုလို Pandemic ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆို အိမ်မှာပဲအနေများတဲ့အတွက် Online Shopping တွေပိုလို့တောင်ထွက်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ကိုယ် Purchase လုပ်လိုက်တဲ့ Item တွေဆိုလည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် Delivery Service တွေလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့ အခုလို E-Commerce တွေ၊ Online Purchasing တွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါ ဈေးဝယ်ရတာလည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူလာတာမို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိလိုက်ပဲ အများကြီး ဝယ်မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ လူအများစုအတွက်တော့ Online Shop၊ E-Commerce Website တွေမှတစ်ဆင့်ဈေးဝယ်ရတာကို အရမ်းနှစ်သက်ကြပေမယ့် တစ်ချို့အတွက်ကျတော့ လည်း Online ကနေဈေးဝယ်မှပဲ Expectaion နဲ့ Reality မတူညီတာတွေ၊ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်လိုချင်တာလည်း ဝယ်လို့ရအောင်၊ မလိုအပ်ပဲလည်း ငွေအများကြီးမကုန်အောင်ဆိုရင် Online Shopping မလုပ်ခင် ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ သတိပြုပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
၁။ Sales/Discount ဆိုတိုင်း ဝယ်မိနေတာ
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတော်တော်များများ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ အဝတ်အစား၊ Cosmetic တွေဈေးချနေပြီ၊ Discount တွေ ပေးနေပြီဆို ဘယ်မိန်းကလေးမှ မဝယ်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝယ်တဲ့နေရာမှာ သတိမထားမိတာက ဈေးလျော့လို့သာ ဝယ်လိုက်ပေမယ့် ကိုယ်တကယ် အကြိုက်ကြီးမဟုတ်တာ၊ အသုံးမလိုပေမယ့် တန်လို့ဆိုပြီး ဝယ်ထားလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Discount တွေရှိလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော အဲ့ ပစ္စည်းကို တကယ်ကြိုက်ရဲ့လား၊ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်လားဆိုတာကို သေချာဆန်းစစ်ပြီးမှ ဝယ်ပါ။
၂။ Product Description ကိုသေချာမဖတ်ကြည့်မိတာ
ဒါကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ် Order လိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့ မတော်တာ၊ ကျပ်နေတာ၊ ချောင်နေတာ မျိုးတွေဆို တကယ်ကြေကွဲပြီပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် မမှာခင် အဲ့ အဝတ်အစား ၊ ဖိနပ်ရဲ့ Product Information ကိုသေချာကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့လည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တယ်ဆိုမှ ဝယ်သင့်ပါတယ်။ အင်္ကျီတွေဆိုလည်း Free Size လား၊ Size ရှိရင်လည်း Size Chart ကိုသေချာတောင်းပြီး ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်မယ့် Size ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဖိနပ်ဆိုရင်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ Brand အပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖိနပ် Size တွေကအနည်းငယ်ကွဲတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သေချာဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ။
၃။ Review/Feedback တွေကို မကြည့်ပဲ ဝယ်မိတာ
ဒီအချက်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် Online Shop တွေ၊ Shopping Website တွေကလည်း Reputation ကောင်းပြီး ယုံကြည်ရဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ Amount များသည်ဖြစ်စေ၊ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ Pre-Paid နဲ့ဖြစ်စေ၊ Cash On Delivery နဲ့ဖြစ်စေ ဒီဝယ်ယူတဲ့ Purchasing Procedure တိုင်းကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ချရတဲ့ Site တွေကနေတစ်ဆင်သာ ဝယ်ယူပါ။ အလားတူ Product ပစ္စည်းမမှာခင်မှာလည်း အဲ့ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင်ကို အရှေ့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Customer တွေရဲ့ အဆိုးအကောင်း Review တွေကို သေချာဖတ်ကြည့်ပြီးမှ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင်တော့ မှာယူလိုက်ပါ။
၄။ Card တွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Cash နဲ့ဝယ်ယူတာထက် Bank Card တွေ၊ အကြွေးဝယ်ကတ်တွေ၊ Debit Card၊ Credit Card တွေနဲ့ ဝယ်တာက ပိုပြီးတော့ အကုန်အကျများစေပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Purchasing Transcation တွေက Digital နဲ့ပဲသွားတော့ ငွေအများကြီး မထုတ်ပေးရပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Bank Account ထဲက ကိန်းဂဏန်းတွေပဲလျော့သွားတာဖြစ်လို့ သတိမထားမိပဲ အများကြီး ဝယ်ယူတဲ့၊ မကြာခဏ ဝယ်ယူတဲ့ အလေ့အထကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
#Mistakes Girls Make When Shopping Online
အန္တရာယ်ပြုခံနေရတဲ့ သဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။
ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို စီးပွားဖြစ်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ၊ အန္တရာယ်ပြုမှုတွေ များစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ ၇ ဘီလီယံကျော်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေဟာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို စီးပွားဖြစ်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ၊ အန္တရာယ်ပြုမှုတွေ များစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝကို လုံခြုံမှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ အတူတကွကာကွယ်သွားကြမယ်ဆိုရင် ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါ အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ သဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
World Wildlife Fund (WWF) ကဲ့သို့သော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ မွေးစားရန်အတွက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ရံပုံငွေထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရံပုံငွေအတွက် ကူညီဖို့အတွက် မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သင့်လုပ်အားနဲ့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ များစွာသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေမှာ Volunteer Program တွေများစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီ Program တွေမှာ သင့်ရဲ့ လုပ်အားအကူအညီနဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ၊ ငါးမွေးကန်များ၊ အမျိုးသားဥယျာဉ်များနဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဒုက္ခသည်များရဲ့ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏နေအိမ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အနီးကပ်ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တိရစ္ဆာန်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် သင်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းသာမကဘဲ သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ကယ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိသမျှလူတွေကို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို အန္တရာယ်မပြုဖို့နဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ရောင်းဝယ်နေမှုတို့ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ တောင်းဆိုပေးပါ။ အန္တရာယ်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များမှဖြစ်စေ၊ သူတို့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများမှထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်များကို မဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂရဲ့ အဆိုအရသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသောမျိုးစိတ် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် သစ်ပင်များကိုစိုက်ပျိုးခြင်း၊ စိုစွတ်သောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ဧရိယာအတွင်းရှိကမ်းခြေများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နေ့ကို သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်သလို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားဝိုင်းတွေကိုလည်း ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် Twitter ပေါ်ရှိ @WildlifeDay စကားဝိုင်းသို့ဝင်ရန် hashtag #WorldWildlifeDay ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမိုက်စား Photo တွေအတွက် Pose ပေးနည်းများ
ဒီအချိန်လေးကို အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းလှစွာသော ရိုက်ချက်တွေနဲ့ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါ။
အမျိုးသမီးတို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လှပသောအလှဟာ ဘယ်အချိန်နဲ့မှမတူတဲ့ အလှတရားတစ်ခုပါ။ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားလေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ လှပနေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ လှပမှုဟာ ပြုပြင်ဖန်တီးစရာမလိုတဲ့ လှပမှုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအချိန်လေးကို အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းလှစွာသော ရိုက်ချက်တွေနဲ့ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါ။
တစ်ဘဝစာ အမှတ်တရတွေပြည့်နှက်နေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ့် မေမေလောင်းတို့အတွက် Pose ပေးနည်းလေးတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ Celebrity တို့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အမိုက်စား Photo လေးတွေကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပုံမှန် Pose ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဟာလည်း မေမေတို့အတွက် Relax ဖြစ်စေမှာပါ။ မေမေတို့ ပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေကျပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တာကြောင့် သက်သောင့်သက်သာလည်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
မေမေတို့ ကင်မရာကိုမကြည့်ဘဲ ၄၅ ဒီဂရီခန့်ဘေးစောင်းကာ ဗိုက်ကို လက်ဖြင့် ပင့်ထားပေးပြီး Baby လေးကို ကြည့်နေခြင်းက မေမေတို့ရဲ့ ဗိုက်အလှကို ပေါ်လွင်စေပြီး သဘာဝကျတဲ့ ပုံလှလှလေးတစ်ပုံရရှိစေမှာပါ။
ဖေဖေတို့နဲ့ အတူတူ ရိုက်ကူးမယ့် ပုံလေးတွေအတွက်ကတော့ Baby လေးနဲ့ ဖေဖေတို့ကို နီးကပ်စွာနေပေးခြင်းဖြင့် ဖေဖေတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလည်း ပုံပေါ်စေနိုင်မှာပါ။ ဖေဖေတို့ရဲ့ Baby လေးကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ Pose ကို အမိအရ ရယူထားခြင်းက နောင်တချိန်မှာ ကြည်နူးစရာလေးတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရနေစေမှာပါ။
Outdoor Photo တွေသာမက စတူဒီယိုထဲမှာ အမိုက်စား Photo တွေလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ Outdoor Photo တွေကတော့ နောက်ခံလှပတဲ့ ရှု့ခင်းတွေကိုပါ ပါဝင်အောင်ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်ပြီး စတူဒီယိုထဲမှာတော့ မေမေတို့ရဲ့ ဗိုက်အလှသီးသန့်ကို ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဗိုက်အလှကို ပုံဖော်တဲ့အခါမှာလည်း ဝတ်စုံရွေးချယ်မှုက အလွန်အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုပါ။ အဝတ်အစားဦးစားပေးမဟုတ်ဘဲ ဗိုက်အလှကို ဦးစားပေးဖြစ်လို့ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်အဝတ်အစားအများကြီး မလိုအပ်ဘဲ အရှက်ကာပေးရုံ ဖက်ရှင်က အမိုက်စားမေမေဖြစ်နေစေမှာပါနော်။
မော်ဒယ်လ်မမတွေလို မိမိုက်အထာကျစေမယ့် နည်းလမ်းများ
မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်လို အမိုက်စားဖြစ်နေဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ
ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ "မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်လို‌"ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ Modelling အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နေထိုင်ရာပတ်၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတကာရဲ့အမြင်မှာ အားလုံးကငေးမောအားကျရလောက်တဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိခြင်းမျိုးနဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို ရပ်တည်နိုင်တဲ့ လူတိုင်းအတွက် သင့်တော်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ပတ်၀န်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ဖက်ရှင်ကျတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှူနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရင်လို ငူငူငိုင်ငိုင်ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ဖြစ်သလို၀တ်စားတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ အားလုံးကငေးယူရတဲ့ စူပါမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ရဲ့ confident မျိုးနဲ့ အမိုက်စားကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘာတွေကစပြီးပြောင်းလဲယူရမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
(၈၀) ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်မှာ အရမ်းကို စိုးရိမ်မှူလွန်ကဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့် အလှတရားကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထဲက အကြီးမားဆုံးရန်သူတော်တစ်ဦးပါပဲ။ အောင်မြင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ်အတော်များများမှာ ဒီအချက်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကတော့ နှူတ်ခမ်းကြီးထူလွန်းတယ် ၊ငါကတော့ ပါးစပ်ပြဲလွန်းတယ် ၊ငါကတော့ သွားလေးခေါနေတယ် ၊ ငါကတော့ပိန်လွန်းတယ် ၊၀လွန်းတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေအပေါ် စိတ်သက်ရောက်တာမျိုး သူတို့မှာမရှိပဲ အဲဒီအားနည်းချက်ကိုပဲ ဆွဲဆောင်မှူတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးယူထားတတ်ကြတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ မိမိုက်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို အားသာချက်ဖြစ်အောင် ယုံကြည်မှူရှိရှိဖန်တီးယူဖို့ပါပဲ။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်အားကျရတဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးပေါ်မှာ Inspired လုပ်တယ်ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများရှိကိုရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါစေ သူ့ဘ၀မှာ အားကျအတုယူရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကတော့ရှိကိုရှိခဲ့ဖူးသလို ရှိလည်းရှိနေဆဲဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အတုယူလေ့လာသင့်တဲ့ လူတွေ၊အရာ၀တ္ထုတွေအပေါ်မှာအတုယူပြီး ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပါ။ပြည်တွင်းပြည်ပက နာမည်ကျော် မင်းသမီး၊မော်ဒယ်တချို့ရဲ့ ဟန်ပန်လှုပ်ရှားပုံ ၊နေထိုင်ပုံ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှူ အစရှိသဖြင့် ကိုယ့်သဘောကျနှစ်သက်ရာကို ရွေးထုတ်မှီငြမ်းပါ။
ငါကတော့ မော်ဒယ်မှမဟုတ်တာ ဖက်ရှင်ကျစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်း၊Website စတာမှန်သမျှကို လေ့လာပါ။ Trendကို မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ စတိုင်လ်အမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အခြေခံကျတဲ့အ၀တ်အစားတွေ နဲ့ စတိုင်လ်မိုက်မိုက် အ၀တ်အစားတွေပါ၀င်တဲ့ အ၀တ်ဗီဒိုတစ်ခုဖန်တီးပါ။ အမြဲကျော့မော့ပြီးစတိုင်လ်ကျနေတဲ့သူတစ်‌ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေပါစေ။
ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို သိရှ်ိလက်ခံခြင်းဟာလည်း အရမ်းကိုအကျိုးများတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအ၀တ်အစားမျိုးကပိုလှစေမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်းသိရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို မိမိုက်နေဖို့အတွက် လှပခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိနားလည်ထားရပါမယ်။ Model ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ခပ်ပိန်ပိန်ကောင်မလေးတွေပဲ အမြဲတမ်း ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အ‌နေအထားကိုချစ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှူကိုလက်ခံပြီး ကိုယ့်အတွက်အလှဆုံးဖြစ်မယ့်အရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ်ဟာ စူပါမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်လို ဆွဲဆောင်မှူရှိပြီး အမိုက်စားဖြစ်နေဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တည်မှူကိုလက်ခံရုံတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပါဘူး။ ကျန်းမာတဲ့အသားအရည်၊ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှူဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ အစားအသောက်၊အနေအထိုင်ကိုလည်း တစ်ဖက်ကဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပုံမှန်လေးပြုလုပ်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလျှော့ချပါ။ အပြင်သွားတိုင်း အလှပြင်ပြီးမှ အမြဲကျော့ကျော့မော့မော့သွားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။
#Like A Model
မိုးရာသီမှာ လုံးဝမပြုလုပ်သင့်တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းများ
ကာတွန်းကမ္ဘာထဲအရောက်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် Fendi ရဲ့ Collection အသစ်
မိန်းကလေးတွေရဲ့ Hot Pick ဖြစ်လာပြန်တဲ့ Scrunchie Trend
Register asaMODA Member Now and Earn Credit 30 Points close